कुन समयमा यौ’नस’म्बन्ध राख्दा भइन्छ ग’र्भवती ? – Tufan Media News
कुन समयमा यौ’नस’म्बन्ध राख्दा भइन्छ ग’र्भवती ?
२७ पुष २०७८, मंगलवार २१:०७
विवाह भएको केही महिनामै साथीसँगी तथा आफन्तजनको प्रश्न आइरिन थाल्छन्, खुसीको खबर कहिले सुन्न पाइन्छ ? उता द’म्पतीको ताक अर्कै हुन्छ । पहिले करिअर निर्माण अनि मात्र फे’मेली प्लानिङ । हिजोआजका वि’वाहित जोडीहरू योजना बनाएर मात्र शिशुलाई धर्तीमा पदार्पण गराउँछन् । उनीहरूबीच यति महिनापछि, यति वर्षपछि मात्र सन्तान ट्राइ गर्ने भनेर योजना बनेको हुन्छ । यद्यपि ग’र्भवती हुन सोचेजस्तो सहज नहुनसक्छ । कसैलाई एउटै प्रयासमा ग’र्भ रहनसक्छ भने कसैलाई महिनौं प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ग’र्भवती हुनका से’क्स गर्नु जति जरुरी छ उति नै कसरी र कहिले से’क्स गर्दा ग’र्भ रहन्छ भन्ने कुराको जानकारी हुनु आवश्यक छ । यी कुरालाई बे’वास्ता गर्दा ग’र्भ नरहनसक्छ ।धेरैजसो द’म्पतीलाई ग’र्भ रहनका लागि कुन समय से’क्स गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नभएको पाइयो । से’क्सको समय सही भयो भने ग’र्भ बस्न क’ठिनाइ हुँदैन ।
ग’र्भ धारणका लागि कति पटक र कसरी से’क्स गर्ने भन्ने जानकारी भयो भने महिनौं कोसिस गर्नु पर्दैन । आफ्नो योजनाअनुरूप सहजै ग’र्भधारण गर्न सकिन्छ । दम्पतीलाई यस्तो कुराको जानकारी नभएको स्थितिमा समस्या समेत सिर्जना हुनसक्छ ।उसो भए ग’र्भधारणका लागि कुन बेला, कति पटक र कसरी से’क्स गर्ने त ?
ग’र्भ कसरी रहन्छ ?जब पुरु’ष प्र’जनन को’ष ‘शु’क्रकीट’ को महिलाको ग’र्भाशयमा अवस्थित अ’ण्डसँग मेल भएर त्यसलाई फर्टिलाइज गर्छ तब मात्र कुनै पनि महिला ग’र्भवती हुन्छिन् ।
कति पटक राख्ने सम्’बन्ध ?एउटा पेरेन्टिङ वेबसाइटले १ हजार १ सय ९४ दम्पतिमाथि अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन सन्तान चाहने दम्पतिमाथि गरिएको थियो । अध्ययनमा उनीहरूले ग’र्भधारणका लागि कति पटक से’क्स गरेका थिए भन्ने कुरा जान्न प्रयास गरिएको थियो ।
यस्तो देखियो ?उक्त अध्ययनका अनुसार आमाबाबु बन्न चाहने ती दम्पतीलाई औसतमा ७८ पटक से’क्स गर्दा सफलता हात लागेको थियो । यो क्रम औसत छ महिना चलेको थियो भने उनीहरूले एक महिनामा औसत १३ पटक से’क्स गरेका थिए ।ग’र्भधारणका लागि कुन आ’सन राम्रो ?
कतिपय मानिसमा के विश्वास छ भने ग’र्भधारण आ’सनमा पनि नि’र्भर हुन्छ । यसका लागि लगभग तीन चौथाइ मानिस मिसनरी पो’जिसन -महिला तल र पुरुष माथि सु’तेर गरिने यौ’न आसन) लाई उपयुक्त माने भने ३६ प्रतिशत जोडीले ड’गी स्टाइल पछ्याए ।ग’र्भधारणका लागि उपयुक्त समय: विशेषज्ञहरूका अनुसार महि’नावारी -डिम्ब निष्कासनको समय) थाहा पाउनु र डिम्ब निष्कासनको पाँच दिनअघि तथा त्यसै दिन से’क्स गर्दा ग’र्भ रहने स’म्भावना बढी हुन्छ ।